देशैभरका कर्मचारीहरुलाइ दशैं बिदा बारे भर्खरै सरकारले दियो अत्यन्तै जरुरी सुचना ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/देशैभरका कर्मचारीहरुलाइ दशैं बिदा बारे भर्खरै सरकारले दियो अत्यन्तै जरुरी सुचना !
देशैभरका कर्मचारीहरुलाइ दशैं बिदा बारे भर्खरै सरकारले दियो अत्यन्तै जरुरी सुचना !
काठमाडौं। देशमा को’रोना सं’क्रमण विस्फोटकरुपमा फैलिएसँगै सरकारले घटस्थापनाको दिनदेखि पूर्णिमासम्म सरकारी कार्यालयहरु ब’न्द गर्न तयारी गरेको छ। कोभिड १९ महामारी व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को शनिबार बसेको बैठकमा घटनास्थापनाको दिनदेखि सरकारी कार्यालय ब’न्द गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको स्रोतले बताएको।
बैठकमा देशामा पछिल्ला दिनहरुमा सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरु सं’क्रमित हुने क्रम ब’ढेको भन्दै दशैंमा कर्मचारीहरुबाट झन कोरोना फै’लिने जो’खिम रहेको भन्दै अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै सेवा घटस्थापनाका दिनदेखि पूर्णिमाका दिनसम्म ब’न्द गर्ने गरी रणनीति बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी भएको हो।
त्यस्तै, उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २१२९ जनामा को’रोना सं”क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा १७४६, भक्तपुरमा १६७ र ललितपुरमा २१६ गरी जम्मा २१२९ जना सं’क्रमित थपिएका छन् ।यसअघि सोमबार (हिजो) काठमाडौंमा १८८८, भक्तपुरमा ११८ र ललितपुरमा २७७ गरी जम्मा २२८३ जनामा को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण पुष्टि भएको थियो ।
त्यस्तै,सार्वजनिक सवारीमा पुरै सिटमा यात्रु राख्न दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय, सिमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय उडान कात्तिक महिनाभर नखोल्ने। सरकारले सार्वजनिक सवारीमा पुरै सिटमा यात्रु राख्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकले यस अघि आधा सिटमा मात्र यात्रु राख्ने निर्णय पुर्नविचार गर्दै पहिलाको जस्तै सबै सिटमा यात्रु राख्न दिने निर्णय गरेको हो।
अहिले छोटो तथा लामो दुरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीले आधा यात्रु मात्र चढाउने गरेका थिए। भाडा भने दोब्बर लिदैँ आएका थिए। दर्शैलाई मध्यनजर गरेर पुरै सिटमा यात्रु राख्ने निर्णय गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। बैंठकले सिमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय उडान कात्तिक महिनाभर नखोल्ने निर्णय गरेको छ।
श्रीमानलाई चि तामा आगो लगाएपछी श्रीमति पनि नि धन